Aung's Investment: Psychology of Losing
Stock Tradingလုပ်တဲ့အခါ Beginnerတွေအတွက် Stop-lossမလုပ်နိုင်တာဟာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဒီဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့တာပါပဲ။ Paper Loss/Unrealised Lossဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံကလေး ကိုယ့်အိတ်ထဲကထွက်သွားနိုင်တဲ့ Chanceကနေ Stop-lossလုပ်လိုက်ရင် Realisedတကယ်ဖြစ်သွားမှာကိုး။ ဒီPostမှာ Money Lossကို Perspectiveမျိုးစုံကနေ ပိုပြီးPalatableဖြစ်စေအောင် ရေးထားပါတယ်။ အောက်မှာရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီး အရှုံးဒဏ်ပိုခံနိုင်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ရေးရကျိုးနပ်ပါမယ်။
Forget about $$$
အရှုံးကို ပိုပြီးManageလုပ်နိုင်အောင် တွေးသင့်တဲ့ရှုထောင့်ကတော့ ပိုက်ဆံကို ပိုက်ဆံလို့မတွေးပါနဲ့။ Pointတွေလို့တွေးပါ။ Casinoတွေမှာ Chipလေးတွေနဲ့ တကယ့်ပိုက်ဆံကို လဲပေးထားတာတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါလူတွေကို ပိုပြီးအရှုံးဒဏ်ခံနိုင်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ ပိုက်ဆံကို ပိုက်ဆံလိုမမြင်ဘဲ ရေလိုသုံးပစ်လို့ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံကို ဘယ်နှဒေါ်လာအစရှိသဖြင့်မတွက်ဘဲ၊ ဘယ်နှPointတော့ Downနေပြီလို့တွေးရင် နည်းနည်းပိုသက်သာပါမယ်။
စစ်ဖြစ်ရင် စစ်သားတစ်ယောက်တော့ သေမှာသေချာတယ်။ ကံဆိုးရင် Civillianတွေတောင်ပါဦးမယ်။ ဒီIdeaကိုတော့ လက်ခံနိုင်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Tradingလုပ်ရင်တော့ အရှုံးမခံချင်ကြဘူး - ယုတ္တိရှိသေးရဲ့လား စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
Remember how you learned ridingabike
စက်ဘီးစီးတတ်သူများ စသင်ခါစက တဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲခဲ့တာ မှတ်မိသေးရဲ့လား။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ သတ္တိရှိကြတယ်၊ သင်ခါစ ဘာအကာမှမပါဘူး။ Helmatလည်း မပါဘူး။ တော်တော်လေး ပြဲကွဲပြီးမှ တဲ့တဲ့စီးနိုင်တာ။ Tradingလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ စစချင်းမှာ Stop-lossဆိုတဲ့ Helmatပါရင် လဲတဲ့ဒဏ်၊ ရှုံးတဲ့ဒဏ်ကို ပိုပြီးခံနိုင်ပါမယ်။ သေချာတာက လဲမှာပဲ။ လဲမှာကြောက်ရင် စက်ဘီးမစီးတတ်သလို ရှံးမှာကြောက်နေရင် Traderဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး။ Tradingစလုပ်လုပ်ချင်း Millionaireဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာလည်း စက်ဘီးမှ မစီးတတ်သေးဘူး၊ ခေါင်းထောင်စီးချင်တဲ့သူလိုပါပဲ။
Learn from Beckham
Beckhamကိုဆိုရင် လူတိုင်းက သူရဲ့ Twistလေးနဲ့ကန်တဲ့ Free kickကိုပဲ ဦးဆုံးပြေးမြင်ကြတယ်။ သူရဲ့ တည့်တည့်ကြီးလွဲသွားတဲ့ Penalty Goal Kickတွေရော သတိရကြသေးရဲ့လား:) Beckhamနာမည်ကြီးတာဟာ သူ့ရဲ့Personalityကောင်းတာထက် သူ့ရဲ့Achievementက သူ့ရဲ့Lossesတွေထက် သာခဲ့လို့ပါ။ သူပါပြီး ရှုံးတဲ့ပွဲတွေမှ အများကြီး။ ဒါပေမယ့် နိုင်တဲ့ပွဲအရေအတွက်ဟာ သူငယ်စဉ်ဘဝက ပိုများခဲ့လို့ပါပဲ။ ဆက်စပ်တွေးလို့ရတာက Soccerဘယ်လိုပြိုင်သလည်းရော ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ Round 1မှာ တစ်ပွဲရှုံးပေမယ့် အုပ်စုတက်ဖို့ Chanceဟာ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးပိတ် Totalအမှတ်နဲ့ Goalအရေအတွက်ကသာ အရေးကြီးတာပါ။ First-halfမှာ ရှုံးနေရင်တောင် စိတ်ဓါတ်မကျရင် Second-halfမှာ ပြန်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ Beckhamလိုလူတွေ ဒူးခေါင်းတော်တော်နာသွားရင် ခဏနားတာလည်း အတုယူသင့်ပါတယ်။ Marketထဲမှာ ဆက်တိုက်ရှုံးပွဲဆက်လာရင် ခဏ Takeabreakလုပ်ပြီး ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကို ပြန်Analyseလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီစကားပုံလိုပဲ မရှုံးဘူးတဲ့ ရှေ့နေ၊ လူနာမသေဘူးတဲ့ ဆရာဝန်မရှိပါဘူး။ ရှိရင်လည်း ကုသိုလ်ကံ တော်တော်ကောင်းသေးလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ တရားခံဘက်က Defenseရှေ့နေဟာ ကိုယ့်အမှုသည် လုံးဝလွတ်ရမယ်လို့ တွက်လို့မရပါဘူး။ ဆယ်နှစ်နဲ့ ကြိုးမိန့်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင် ပိုသက်သာမယ့် ဆယ်နှစ်ကို ရွေးရမှာပါပဲ။ ခေါင်းမာနေရင် ကိုယ့်အမှုသည် သေမှာပဲ။ ဆရာဝန်ဟာလည်း ပုတ်နေတဲ့ခြေထောက်ကို မဖြတ်လို့ လူနာသေမယ်ဆိုရင် ဖြတ်ရမှာပဲ။ မဖြတ်ရင်.....? ဟုတ်ပ သေမှာပဲ :)
ဒါကတော့ မိန်းမတွေအကြိုက်။ Department Storeတွေ ဈေးချရင် ပျော်ကြတယ်မဟုတ်လား။ Further ဘယ်လောက်%offဆိုရင် ပိုတောင်ကြိုက်သေး။ Traderဟာ Retailerတစ်ယောက်လိုတွေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းရောင်းမထွက်ရင် ဆက်ကိုင်ထားပြီး Further Reducedဆိုပြီးခွက်ခွက်လန်အောင်ရောင်းမလား? စောစော cut lossလုပ်ရမလားဆိုတာ Retailerတွေလိုပဲတွေးရပါမယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Losingဟာ ထင်သလောက်မဆိုးမှန်း၊ Tradingတစ်ခုထဲမှာပဲ special caseဖြစ်နေတဲ့ အရာမဟုတ်မှန်း ပိုနားလည်သွားမှာပါ။ အရှုံးဆိုတာ ကိုယ့်mindsetထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ အရှုံးကို အရမ်းအရေးပေးပြီး လုပ်သင့်တာမလုပ်ရင် ပိုဆိုးမယ်၊ အမြတ်အစွန်းရမယ့် Tradeအသစ်တွေကို လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Losing is only in your mind and you have to manage losses. Don't let losses manage you.
Happy Cutting Losses!
Posted by Aung Myo Htet at 11/29/2010 03:10:00 PM
Labels: Management, Mindset, money management, Psychology, stop-loss